Sea Side Resort & Spa - ehhotela 5-star, okuyinto minyaka yonke uthola izinkulungwane zezivakashi abafuna ukuphumula eGreece. It has konke ukuthi kuzosiza ukwenza iholide okukhanya ikhiqize kakhudlwana. Nokho, izinto zokuqala kuqala.
Sea Side Resort & Spa Indawo lakhiwa ngo-2004. Ngo-2009, kwanqunywa ukuba balungise eziyinkimbinkimbi. Kwathi ngonyaka olandelayo, ngo-2010, sakha block entsha amakamelo, okuyinto ibekwe amamitha 400 kusukela isakhiwo main. Yena, ngasendleleni, inezidingo, pool yayo ehlukile. Ngemva ukwakhiwa inombolo entsha block amakamelo a eziyinkimbinkimbi ehhotela lande laba ngu-248.
Ihhotela isendaweni umugqa wokuqala, ukuze ukwazi ukuhamba ogwini ukuze emva kwamaminithi ambalwa. Futhi eduze hhotela sezindiza. Itholakala Heraklion, okuyinto kancane amakhilomitha angaphezu kuka-20 kusukela ehhotela.
By the way, eyinkimbinkimbi langempela itholakala resort ngokuthi Agia Pelagia. Ukuze-ke kuholela umgwaqo omkhulu omusha kazwelonke E75. The yokungcebeleka ngokwayo iyindawo enhle, owawuseduze bay ethokomele nge lolwandle esikhulu anesihlabathi. Lokhu onokuthula ethulile nokudoba umzana kuthandwa kakhulu phakathi izivakashi. Namanje kakhulu ngoba kukhona Sea Side Resort & Spa - kwelinye lamahhotela best in lonke saseKrethe.
Leli hhotela has konke izivakashi ngeke kukhanye up isikhathi sakho sokungcebeleka bese nijabula. Igama lehhotela has isiqalo "spa", okuyinto libonisa ngokucacile ukuthi ehhotela has a-isikhungo SPA. Kukhona ungakwazi ukujabulela impilo nobuhle zokwelapha ezihlukahlukene. Manicure, pedicure, massage, okugeza Turkish, sauna, Jacuzzi, zasendlini indawo yokubhukuda, Hammam, yoga - izivakashi nethuba ukwenza lutho.
Sea Side Resort & Spa Indawo Ubuye ukuqina isikhungo, basketball ne-volleyball izinkantolo, insimu webhola, ikamelo amabhiliyade kanye ithenisi enkantolo. Yiqiniso, zisekhona ezimbili ongaphandle okubhukuda nge ilanga ithala. Nakuba abaningi bakhetha ebhishi. Akumangazi, ngoba abantu beza lapha ukuze ujabulele iholidi ulwandle. Ngesikhathi sebehlezi ogwini usengakwazi ukujabulela ezihlukahlukene amanzi ezemidlalo. Ngokwesibonelo, diving.
Futhi kusihlwa ngesikhathi iqembu ehhotela izithombe sesihlela imibukiso nezinhlelo zokuzijabulisa. Izivakashi, owafika nezingane zabo, abakwazi ukhathazeke yokuthi ukuze kuyisicefe. Ukuze nabancane ehhotela has a yangasese yokubhukuda, mini-club kanye ebaleni lokudlala.
Ensimini ka Sea Side Resort & Spa 5 * kuyinto yokudlela kakhulu lapho izivakashi zingajabulela ngesiGreki ngamazwe. Ngaphakathi yezilungiselelo romantic, futhi egumbini ngokwayo lihlotshiswe ifenisha enhle futhi kuyabiza. Lapha, izivakashi nethuba oda inhlanzi noma inyama phezu hlupha - izitsha labapheki ezifana ukupheka phambi kwabo. Uma ungafuni ukuya indawo yokudlela, ungacela ukulethwa ukudla neziphuzo egumbini - sevisi kungekhona ukuthi sezizimbi kakhulu kunangesikhathi isikhungo. By endleleni, abantu nezingane Ungakhetha into ingane yakho kusukela kumenyu ekhethekile izingane.
Ngokuvamile, kukhona ezihlukahlukene izitsha. Kukhona konke - kusuka inhlanzi nenyama, saqeda nge kophudingi nezithelo. By the way, ukunakekela izivakashi ngabanye itjheje izinga okusezingeni uphuzo. iwayini wendawo Ikakhulukazi. Ukuhlala lapha eholidini, kufanele nakanjani lizame okungenani kanye.
Okuningi, ngaphezu yokudlela ehhotela Sea Side Resort & Spa 5 *, kukhona Amabha amabili. - omunye endaweni yokwamukela izivakashi. It ukhonza iziphuzo kanye Ungadla. Kusihlwa lapho umsindo emnandi umculo bukhoma. Ibha yesibili itholakala ngasechibini. Lapho, izivakashi zijabulela itiye, ikhofi, amakhekhe nesiphuzo.
Izivakashi uthi dinner kusihlwa zonke - kodwa ngesikhathi ibambene isizini. Kunezindlela ezimbili ukuxazulula le nkinga kancane - noma ukuza yokudlela kamuva noma usuphumule ngasekupheleni kwentwasahlobo noma kwentwasahlobo.
Sea Side Resort & Spa (Crete) inikezwa kuzivakashi Igumbi inkonzo. Kodwa namanje kukhona ngaphezulu. Ngaphezu kwakho konke lokhu okungenhla, eyinkimbinkimbi has yokupaka yangasese, imoto eqashiwe, izitolo (ukudla eziyisikhumbuzo), kanye ilondolo nge zokuhlanza owomile. Uma izivakashi banesidingo, bangakwazi ushayele umhlengikazi ukuhlala izingane, noma udokotela - esimweni izinkinga zezempilo.
Ihhotela Okuningi Inekamela inkomfa futhi ehhovisi elalinamadoda ungathatha noma uthumele ifeksi, futhi wenze ikhophi yanoma yikuphi amaphepha imibhalo.
Ihhotela unezisebenzi abaqeqeshiwe ekubhekaneni Igumbi inkonzo futhi izivakashi. Abasebenzi ukukhuluma isiJalimane, NgesiNgisi nangesiGreki. Nokho, okubaluleke kakhulu, ku eziyinkimbinkimbi okwamanje kukhona 12 abantu abakhuluma isiRashiya. Bahlale bekulungele ungisize uma kudingeka.
Futhi izivakashi okwengeziwe ukufika akuyona izithelo engajwayelekile futhi iwayini. Izilokotho kuyilabo ababesanda kushada, usuku lokuzalwa kanye nezivakashi njalo nazo enikeziwe. Isimo sengqondo esinjalo maqondana izivakashi abakwazi kodwa jabulani.
Lesi sigaba igumbi isabelomali. usayizi Aphathimenti 29 square metres. m. Lokhu stylish, yavula ikamelo layo elikhulu ahlotshiswe imibala efudumele, has a esikhulu 2-kombhede embhedeni usofa. Amafulethi kungaba ukushalazela amaphutha angasho noma kuvulandi noma ithala. Kodwa nomaphi kukhona ifenisha - etafuleni nezihlalo. Kumnandi ukufika lapha emoyeni opholile bajabulele indawo, ngijabulela ukuthula ikhofi okumnandi.
Igumbi eliningi has a yokugezela nge eshaweni noma ubhavu ne khulula imikhiqizo ukunakekelwa siqu. Futhi izivakashi nge hairdryer, air conditioning, ephephile, ibha mini ne-plasma TV neziteshi satellite.
Intengo ezindlini ingase ixhomeke endleleni ezicashile ezahlukene - ovela ku-opharetha hambo, inkathi, futhi bangaki izinyanga ngaphambi kokufika kuhlelwe lokubhuka izivakashi. Ngokwesilinganiso, laba amafulethi kuyodingeka bakhokhe mayelana 90 000 ruble - is intengo ngesonto ngokuhlala ehhotela amabili ngesevisi "zonke okufakayo". Ukuze ezintathu kule nombolo izoba ngu-125 m. P. Kodwa ngokuvamile, umuntu angabona ngokuvamile uthole izaphulelo ezinhle. Ngezinye izikhathi ziphakama 30%. Futhi kungcono ukulondoloza okuhle.
Uphakeme 2 embhedeni-amafulethi
Lona isigaba esisodwa ngaphezulu amakamelo ehhotela Sea Side Resort & Spa Ihhotela 5 *. Indawo 26 sq. m. Ngaphakathi kukhona konke kuyafana nalokho efulethini esishiwo ngaphambili. Kukhona umehluko eyodwa kuphela, okuyinto ebalulekile kwabaningi - uhlobo. Yena livulekele komkhathi esingapheliyo kolwandle. iholidi ngesonto kulezi amafulethi kungadla ruble ecishe ibe yizinkulungwane 100 ezimbili (futhi nge "zonke okufakayo" inkonzo). Ukuze ezintathu intengo, ngokulandelana, 150 m. P.
Kodwa nokho kukhona isigaba amakamelo Uphakeme nge pool yangasese. Ilungiselelwe ukusetshenziswa ezivamile izivakashi of the amafulethi 11 (njengoba esiphezulu). izivakashi Okuningi abakhetha ukuhlala kuleli gumbi nge Slippers, bathrobes efonini.
140 r. P. - abaningi kuyodingeka bakhokhe ukuze abahlala kule efulethini (2 abadala 1 ingane).
Abantu abaningi bathanda ukuhamba ngokuzimela. Ukuphatha ihhotela Side kuyona Sea & Spa kuyinto (Greece) uthatha lolu ku-akhawunti. Ngakho leli hhotela ifakwe ngokugcwele ukuze abavakashi ezimele. Izimo ziyefana emakamelweni Superior, kodwa kubiza amathani angu-10. P. ngosuku.
Lesi sigaba amakamelo ehhotela futhi izici. endaweni wabo 28 square metres. m. Ngaphakathi imele embhedeni usofa bese embhedeni-2. Le ndlu ngokwayo okumvulela kuvulandi kwanikeza. Ubulili ngaphakathi zemabula Tile. Amakamelo okulala awabange ngizibonge Ingaphakathi stylish, elihlanganisa ukukhanya kanye nemibala okwesibhakabhaka. Ifenisha kuyinto yesimanje kanye entsha. 125 r. P. - intengo sokuqala efulethini. Kodwa kulokhu buka kuzovula ungene engadini. Ngingathanda ukujabulela kolwandle, ehlezi emphemeni yakho? Kuyodingeka bakhokhe ngaphezulu - mayelana 135 m p .. ukuhlala isonto ngaleso efulethini. Phela, endaweni yaleli samuntu phezu 2 square metres. m.
Kuyathakazelisa ukuthi ifulethi, ngisho bafudumale. Kungaba exhunyiwe uma izivakashi uyozizwa cool. A sithandeke ngokwengeziwe Igumbi inkonzo. Izibuyekezo ukuthi ushiye abantu abaye bavakashela kule ndawo, ukuvumela ukubona lokhu. Amathawula, izingubo zangaphansi - konke kufakwa kuhlanzeke futhi kube kusha njalo. Inhlanzeko abasebenzi yangasese futhi unezela abasha ngokushesha nje lapho ukuqeda.
Lesi sigaba sokugcina zamagumbi kufanele abathinte ukunakwa, ukhuluma ngani Sea Side Resort & Spa 5 * (Agia Pelagia). Kukhona njengoba okuhlukile evamile, futhi ichibi yangasese. Njengoba kunjalo nge amafulethi ngcono.
Isici esiphawulekayo kulesi sigaba - umthamo wabo esiphezulu. Kulezi amakamelo ungahlala abantu abane. Stylish, efulethini yesimanje has a yokugezela ivulekile kuvulandi hhayi kuphela lihlale kwanikeza, kodwa futhi amakamelo amabili okulala ehlukile.
ukuhlala Isonto egumbini nomndeni sea view izobiza cishe 240 m. P. ngoba abantu abane ngesonto (isevisi "zonke okufakayo"). Uma kukhona phakathi isaphulelo, uthola ukuhlala kulesi sigaba cishe 200 m. P. By the way, sijabule ngokuthi zifaka i-VAT intela idolobha emalini. Ngo amahhotela eziningi ikhokhelwa ngokwehlukile.
Lesi sakhiwo uzama eziningi. Futhi okokuqala, yisizathu esikhulu kunazo zonke - kuyinto ebhishi eduze ehhotela. Okwesibili - "stardom" yakhe. Futhi-ke, eziningi okubuyayo (bona kuzakhulunywa ngakho kube sekupheleni).
Ngokuvamile, kule ehhotela kweso ubuthaphuthaphu. Uma manje uzama ubhuka test, uzophawula ukuthi iningi izinsuku kwesizini ezayo ezindlini sezivele agodliwe.
By the way, kungcono eze lapha phakathi entwasahlobo noma ekwindla. Ngo-April eKrethe futhi benza nokubusa tale - izimbali iqala, futhi uma lesi siqhingi siqala uyaphila. Futhi izinga lokushisa ngokuvamile ifinyelela 22-24 degrees. Futhi ngaleso sikhathi siye ungakaqali iholidi ukuze abantu lapha ingcosana.
Ihhotela angazamukela izingane yanoma yimuphi yobudala. Uma ingane yakho ine eminyakeni engaphansi kwemibili, inombolo uyobeka uhlaka kanye yokuhlala yayo ngeke kufanele ukhokhe extra. Vele uthole imbeleko, udinga uyibike sikhungo yokuhlala kusengaphambili - kangcono lapho iyala. By the way, kuzodingeka ukuba ashiye ulwazi lwabo credit card. kuthatha Ihhotela "Visa", "Master Card" futhi "Maestro".
Izivakashi abaye bavakashela lapha, ngithi - ihhotela hhayi kahle kuphela ngokwaso njengoba 5-star. Enjalo! I uhlala ngokugcwele wentengo. Amagumbi ziyefana ezithombeni. Empeleni, njengoba eziyinkimbinkimbi ehhotela.
Uma abantu akudingeki isikhathi ukutshela mayelana nokufika kwakhe ekuseni (futhi ikoloni iqala ngo 14:00), akunankinga. Anikeza amathawula, igumbi sigqoka elineshawa futhi yangasese, kanye ebhishi izesekeli. Imithwalo kungenziwa kwesokunxele egumbini isitoreji futhi siye ebhishi, lapho kukhona njalo izikhala. Noma ibhulakufesi.
Wonke amasevisi kuthiwa encazelweni ezahlukene ehhotela, ayatholakala. Udinga imoto? Izimoto eziqashiswayo ukunikeza. Ngifuna ezinye cocktail ikakhulukazi? Kufanele atshele uweta wotshwala enkantini, futhi uyokwenza - ochwepheshe zendawo ukwazi izindlela eziningi.
By the way, ukudla kuyinto enhle futhi uphatha. Kukhona konke: isobho, amasaladi, imifino, izithelo, ice cream. Ikakhulukazi ukuncoma pizza - kuphekwe ke emihle yayo. Ngokuvamile, uya lapha, ukuthatha inkonzo "zonke okufakayo" - ukuze uzisole akudingekile.
Leli hhotela ekahle yokubaleka romantic. Izivakashi eziningi ukuhlala lapha - kungcono imibhangqwana esemisha. Vumela ehhotela futhi kukhona izindawo izingane, kodwa akukuhle ukuya lapha nabo. Kukhona ehhotela ekhethekile imikhaya nezingane. Futhi kukhona amahhotela izindlu imindeni. Leli hhotela akugcini nje elinesimo emkhathini okhethekile eziphumulele imibhangqwana. Futhi phezu kwegquma. Ngenza eziningi ihamba. Futhi izingane ezincane futhi strollers kuzokuhlupha kakhulu.
Kodwa kuze kube iholidi ngaphambi ehhotela romantic Luhle. Lokhu kuqinisekiswa eziningi.
Accounting kanye ukwesulwa akhawunti ekhokhwayo